Ny fivoriana ao am-Po - ny fahafahana Misafidy-Tokana Ihany ho an'ny lehibe sy ny olona sy ny antony
Ny fivoriana ao am-Po — ny fahafahana Misafidy-Tokana Ihany ho an’ny lehibe sy ny olona sy ny antony
Avy ny Fivoriana ao am-Po ny sampan-draharaha ho an’ny tokan-tena ara-dalàna fantatra
Amin’ny lasibatra mitarika, dia hihaona mahaliana ny olona izay te-hihaona aminao
Ny fampahafantarana tafatafa miaraka amintsika dia hamela anao mba fantatro avy hatrany ny mombamomba azy ianao dia ho mifanaraka amin’ny endri-javatra sy ny fangatahana. Isika dia manome antoka indrindra ny maha zava-dehibe sy ambony indrindra tsiambaratelo.
Isika dia tena boky ho an’ny rehetra ny Tokan-tena ny olona izay te-mahafantatra olona afaka mampiaraka anjara sy ny antony lehibe fahalalana. Raha toa ianao ka tokan-tena na manambady, nisaraka, nisara-bady, na maty vady ny Fivorian ny Fo dia ho anao.
Ny fampahafantarana tafatafa miaraka amintsika dia hamela anao mba fantatro avy hatrany ny mombamomba azy ianao dia ho mifanaraka amin’ny endri-javatra sy ny fangatahana. Isika dia manome antoka ambony indrindra ny maha zava-dehibe sy ambony indrindra tsiambaratelo. Ity tranonkala ity dia mampiasa Cookies, ao anatin’izany ny antoko fahatelo, mba hanome anareo amin’ny asa mifanaraka amin’ny ny safidinao.
Amin’ny fanohizana ny mijery anao hanaiky ny fampiasana
Fanazavana fanampiny. Aho hanaiky Izany toerana, mampiasa cookies mba manome anao ny tsara indrindra browsing traikefa izay azo atao. Amin’ny fanohizana ny mampiasa izany toerana tsy misy ny fanovana ny mofomamy toe-javatra na tsindrio eo amin’ny ‘Ekeo’ mba hamela ny fampiasana
← Fido-azo atao ny mahafantatra ny isan'ny tselatra azo. Fido Italiana Karazana"
An-tserasera Niaraka Cams Free VELONA Ifandrimbonana Cam mba Cam olon-Dehibe ny Lahatsary amin'ny Chat →